INDLELA UCHRISHELL STAUSE AVAKALELWA NGAYO MALUNGA NO-EX JUSTIN HARTLEY'S RELATIONSHIP ENTSHA - IINDABA
Indlela uChrishell Stause avakalelwa ngayo malunga no-Ex Justin Hartley's Relationship eNtsha
Umonakalo omkhulu. Ukuthengisa ukutshona kwelanga inkwenkwezi Isizathu sikaChrishell waziva ehlatyelwe ngaphakathi kwentliziyo yenhliziyo xa efika kumyeni othile owahlukileyo UJustin Hartley kunye nentombi entsha Sofia Imilenze ibikade ixhuma, unikezelo luxelela kuphela Ukuchwetha .
UJustin usongele imela nzulu nangakumbi ngokwenza ubudlelwane babo kwi-Instagram busemthethweni, umntu ongaphakathi uyaqhubeka. Wayekrokrela ukuba inye into eyenzekayo phakathi kukaJustin noSofia kwangaphambi kokuba baye esidlangalaleni kwaye bahlala bezama ukubeka izinto ngokudibeneyo kwaye bafumane inyani.
mde kangakanani heath hussar
UJustin, 43, wafaka uqhawulo mtshato kuChrishell, 39, ngo-Novemba ngo-2019 ekhankanya iiyantlukwano ezingenakulungelelaniswa njengesizathu sokuqhawula umtshato. Aba bafazi baqhekeka emva kweminyaka emibini betshatile, nangona kunjalo bebekhona ngokudibeneyo ukusukela ngo-2013.
Ubukhazikhazi bebrunette babonakala buvale amehlo sisisombululo sikaJustin. Ngexesha lesithathu le Ukuthengisa ukutshona kwelanga Utyhile ukuba wamthumela umxholo wokubhaliweyo emazisa ukuba ugcwalisile ngoqhawulo mtshato. Kwimizuzu nje engama-45 kamva, umhlaba wawusazi, uChrishell wakhankanya kulo mboniso. Ndenza inzame zokuyigcina ngokudibeneyo. Kungcono kakhulu ngaphandle kokulibaziseka njengesiphumo somntu wonke kwihlabathi liphela esazi ngeli xesha linye bendisazi… Ngaba ukhe wakhatywa liliza kwaye awazi nokuba leliphi iqhinga lokuqubha ukuze uvuke? Utshilo kwi-costar UMary Fitzgerald .
Kwiinyanga nje ezintandathu emva kokuba uJustin efake isicelo sokuqhawula umtshato, Ngeveki uqinisekisile ukuba uthandana nomntu wakhe wangaphambili Abancinci kunye nabaNqabileyo iindleko. Ngomhla ka-Meyi, u-Justin noSofia babonwa ukuba babelana ngokumanga emva kokuba bemshiye ekuqeshweni kwezempilo eLos Angeles, ngokuhambelana nemifanekiso efunyenweTMZ.
Nge-9 ka-Agasti, uSofia wathumela ifoto efihlakeleyo yomntu ophethe ikepusi ye-baseball ecaleni kwakhe kwiNdaba yakhe ye-Instagram ene-caption, Elula njengeCawa mornin '. UJustin ebonakala ngathi uqinisekisile ukuba ngumntu ngaphakathi komfanekiso ngokwabelana ngesithombe sakhe sobuqu esithwele ikepusi ye-baseball kunye namazwibela alinganayo nakaSofia.
Ukulandela ulwazi lobudlelwane obutsha bukaJustin, uChrishell ebethanda ii-tweets ezixela kakhulu, ebonisa ukuba Sithi aba inkwenkwezi inokufuna ukumkhohlisa noSofia, 31. @ UJustinhartley wenza ifilimu yokutshintshela eCanada ngexesha elifanayo nentombi yakhe entsha @SofiaPernas wayefota ngexesha lasehlotyeni ngaphambi kokuba bahlukane. Ixesha likhangeleka ngathi kungenzeka ukuba lamqhatha u @ Chrishell7 kwaye lathatha indlela yobugwala ukuze lihlale kude noncedo lomlingane kwaye limkhanyise ngegesi, funda enye yeetweets ezininzi ezifihlakeleyo inkwenkwezi yesepha yokucoca eyayixabisile.
NgoLwesibini, Agasti 11, owayengumfazi kaJustin ULindsay Korman-Hartley ufike apha kumkhusela phakathi kwezityholo zokunganyaniseki. Kwirhafu ngendlela ye-Instagram, wayemazi njengomzekelo wendoda ezinzileyo.
Ngaba i-starbucks ivule usuku lwesikhumbuzo
Izigaba: Iindaba Umqala Tech-Iindaba
I-corral yegolide evulekileyo ngekrisimesi
U-edith keeler ngumntu wokwenene
michael green net efanelekileyo
ukuhanjiswa kweposi kwemihla ngemihla
Iibhasikiti isizini 2 hulu
litshabalale ibali eliyinyani
Imiboniso bhanyabhanya entsha ye-aurora teagarden 2019